ममता बेनर्जी आगोसँग खेल्ने काम गर्दैछिन् – विमल गुरुङ
भारतमा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली भाषीहरुले अलग गोरखाल्याण्डको माग गर्दै दर्जन बढी आन्दोलन गरे । संघर्ष शान्तिपूर्ण पनि भए । र, हिंसात्मक पनि ।
सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङले दार्जिलिङ, डुवर्स र सिलिगुडिको तराई भूभागलाई समेटेर पश्चिम बंगालबाट अलग गरी गोरखाल्याण्ड राज्य बनाउने माग राखी आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनमा २ हजार बढी नेपाली भाषीले ज्यान गुमाए । घिसिङले जनताको रगतको मूल्य बुझ्न सकेनन् र आन्दोलनलाई सम्झौतामा विसाए । एकताका दार्जिलिङ र पश्चिम बंगालको राजनीतिमा छाएका घिसिङ आन्दोलनलाई विसाएसँगै दार्जिलिङको राजनीतिबाट अस्ताए पनि । तर घिसिङलाई भारी भएको आन्दोलनको डोको बोक्ने भरियाको भने कमी भएन । विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक व्यक्तिले आन्दोलनको डोको बोकिरहे ।
सन् २०१७ मा ममता बेनर्जी सरकारले विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन ३ महिनाभन्दा बढी चल्यो । १२ जना आन्दोलनकारीको हत्या भयो । सयौं घाइते भए । हजारौं आन्दोलनकारी अहिले पनि विभिन्न मुद्दामा प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
यसैवीच, सन् २०१९ को लोकसभाको निर्वाचनले दिल्लीको पारो असोजमा पनि बढिरहेकै छ । र त बढ्दो पारोको प्रभाव गोरखा जनमुक्ति पार्टीलाई पनि परेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गोरखा जनमुक्ति पार्टीलाई विनय तामाङले चोइटादिएका छन् । र अलग गोरखाल्याण्डको अगुवा नेता तथा गोजमोका पूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङ भने अहिले पनि भूमिगत हुनुपरेको छ ।
थुप्रै अपराधिक प्रकृतिका मुद्धा लगाईएका पूर्व गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासक साथै गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाका अध्यक्ष बिमल गुरुङ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नविकरण गर्दै समयलाई पर्खेर बसेको भन्छन् । यसैबिच इन्डिया टुडे की पत्रकार रोमिता दत्तले गोप्य स्थानबाट उनको एक विशेष अन्तरर्वार्ता गरेकी छिन् ।
यता, तपाईं लुकेर बसिरहनु भएको छ । तर उता बिनय तामाङले गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा अनि जिटिए लाई नियन्त्रणमा ल्याइसके नि ?
तामाङको आफ्नै बिचार र जीवन उनको नियन्त्रणमा छैन । उनी केवल एक कठपुतली हुन् । जसको डोरी कलकत्ताबाट संचालन हुने गर्दछ । म लुकेको हैन । जबसम्म केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता डाक्दैन तब सम्म म एक सादा जीवन व्यतीत गरिरहेको हुनेछु । जनता मसँग नै छन् । राज्यको गुप्तचर बिभागको रिपोर्ट हेर्नु भयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ, अझै पनि ७० प्रतिशत जनता म सँगै छन् ।
फेरि अर्काे लोकसभा चुनाव आउँदैछ नि ?
जब म सत्तामा थिएँ । त्यतिबेला पनि मैले राजनीति गरेको थिइन । गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जनताको इच्छा अनि आंकाक्षा पूरा गर्नको निम्ति गठन गरिएको पार्र्टी हो । र म त्यसको निम्ति समर्पित छु । एकपटक वार्ताको माहोल बनोस । त्यसपछि पहाडमा फेरी गणतन्त्र फर्कने छ ।
विनय तामाङले पार्टीमा कब्जा जमाएपछि तपाई नयाँ पार्टी खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनिन्छ । अथवा वास्तविक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भनेर दाबी गर्नुहुन्छ ?
म केही दाबी गर्दिन । कोलकत्ताले खडा गरेको एक दुई ब्यक्ति बाहेक सबैलाई नै मैले गोरखाजनमुक्ति मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने थाहा छ । अहिले नै हामी कसलाई सहयोग गर्छौं भनेर भन्न मिल्दैन । तर वर्तमानमा हामी भारतीय जनता पार्र्टीको साथमा छौँ ।
तपाईं कुन अवस्थामा बिजेपी लाई सहयोग गर्नुहुनेछ ?
हामीले अहिलेसम्म चुनावमा आफै खडा हुने या कुनै पार्टीसँग गठबन्धनमा जाने भनेर निर्णय लिएका छैनौं । त्यसबारे हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेछ । म मेरो क्षेत्रमा रहेका गरीब नानीहरू को उत्थानको निम्ति समर्पित छु । चाहे ती गोर्खा हुन्, आदिवासी हुन्, राजवंशी, बंगाली, विहारी या कुनै जातिका हुन् । उनीहरुले म जवान हुँदा जे जस्तो समस्या भोग्नुपर्यो त्यो दुख उनीहरुले भोग्न नपरोस । हामी यही मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्वाचमा जाने छौं ।
के राज्य सरकारसँग फेरि शान्ति कायम गर्ने कुनै उपाय छ जस्तो लाग्छ ?
हेर्नुहाेस, हामी पश्चिम बंगाल सरकारसँग कहिलेपनि युद्धस्तरमा थिएनौँ र छैनौँ पनि । हामी दुईवटा राजनीतिक दल हौँ । जसको गोर्खाल्याण्ड प्रति बेग्लाबेग्लै राय छ । ‘वार्ता’ राजनीति मा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । अनि हामी केन्द्र अनि राज्य सरकारसँग त्रिपक्षीय वार्ताको लागि तयार छौँ । तर वास्तवमा ममता बेनर्जी सरकार नै बारम्बार वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ ममता बेनर्जीले सिक्किमसँग शान्ति कायम गरिसकेकी छिन् । तपाईंले सिक्किमका मुख्यमन्त्री तथा तपाईका मित्र पवन चाम्लिङलाई पनि आफ्नो मित्रबाट गुमाउने भएको हो ?
ममता बेनर्जी कसैसग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न सक्छिन् । यो उनको र राज्य सरकारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर सिक्किमका जनता र दार्जिलिङे जनता एक परिवार जस्तै हुन् । सिक्किम ले जहिलेपनी आवश्यकता परेको बेला हामीलाई सहयोग गरेको छ । फेरी पनि सहयोग गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
सरकारले तपाईलाई जिटिए कोषकाे दुरुपयोग गरेको दोष लगाएको छ ?
उनीहरुले तिनपटक अडिट गराए तर कोष दुरुपयोग गरेको भेटेनन् । हामीले एक रुपैयाँ पनि हिनामिना गरेका छैनौँ । म चाहन्छु सिएजी ले विशेष अडिट गरोस । म निश्चिन्त र ढुक्क छु, उनीहरुले कोषबाट दुरुपयोग गरेको भेट्ने छैनन् ।
फेरी पडाडतर्फ नै फर्काैँ । तपाईले भन्नुभयो एकपटक वार्ता होस् फेरी पहाडमा गणतन्त्र आउने छ । तर यहाँ त वार्ता विना नै शान्ति आएको छ नि ?
पहाडका जनता सधैँ शान्तिको निम्ति प्रयासरत छन । पहाडमा हिंसा पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा खटाइएका विभिन्न एजेन्सीहरु मार्फत गराइएको हो । अहिलेपनि हजारौं मानिसहरु पक्राउ पर्ने त्रासले घर फर्किन सकेका छैनन् । यो शान्ति होईन । यो त संकटकालिन स्थिति हो । मानिसहरु फेसबुक मा गरिएको कमेन्ट को आधार मा पक्राउ पर्दैछन् । दार्जिलिङ क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यहाँ चार खण्ड बाट अन्तराष्ट्रिय सिमानाहरु छन् । बंगलादेशी शरणार्थी, रोहिङ्ग्या शरणार्र्थीहरु लाई यहाँ अवैध रुपमा बसोबास गराइदैछ । तर, ममता बेनर्जीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, सरकार आगोसँग खेल्ने काम गर्दैछ । र केन्द्र सरकार पनि यसबारे अवगत छ ।
के तपाईलाई ममता बेनर्जीको दल तृणमूल कांग्रेस बाट केही संदेश हरु आएको छैन ?
हाँस्दै, अहिलेसम्म तृणमूल सरकार बाट तनावको मात्रा घटाउने कुनै प्रयास भएको छैन । तृणमूल कांग्रेस केवल एउटा पार्टी हो, जुन भोलीको दिनमा सत्तामा हुन या नहुन पनि सक्छ । त्यो निश्चित छैन । सिपिआइएम ले ८६ मा आतंक फैलाएको जस्तै ममता पनि आतंक फैलाउँदै छिन् । म यहाँ के भन्न खोज्दैछु भने मित्रता त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी एकाअर्काको मानलाई सम्मान गर्छाैँ ।